Posted by Tranquillus | Mar 14, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Wax walba diyaar bay ku yihiin guriga, maalmo yar oo fasax ahna waad aadaysaa. Waxaad u qaadatay saamiyada asxaabtaada si loo daweeyo feylasha muhiimka ah. Tan waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn. Saaxiibadaa ama macaamiisha kula soo xiriiri kara waa in lagu ogeysiiyo maqnaanshahaaga.
Si dib looguugu soo celiyo muuqaal halista ah iyo xirfadleyda, waxaan kugula talinayaa inaad ka shaqeyso diyaarinta fariinta maqnaanshaha tooska ah 'IT' waa su'aal muujineysa maqnaanshahaaga fariin isla waqtigaas oo gaagaaban oo sax ah. Waad diyaarin kartaa, haddii farriintaada Hal farriin saaxiibadaa iyo mid kale oo macaamiishaadu oggol yihiin Ama si fudud farriin caadi ah oo loogu talagalay qof kasta oo ka tirsan ama ka shaqeeya shirkaddaada.
Qaabeynta: shan daqiiqo oo safar YouTube ah.
Halkan waxaa ah adeegsadayaashaMuuqaalka oo waxaa jira kuwa Gmail.
Tusaalooyinka fariimaha maqnaanshaha ee ku qoran qaab caadi ah
Xusuusnow in tani ay tahay farriin macluumaad ah oo sidaas darteed ay tahay inay caddeyso dhowr qodob oo gaar ah.
Taarikhda bilowga iyo dhamaadka dhamaadka ciidahaaga.
Sheeg haddii aad marin u leedahay farriimahaaga inta lagu jiro muddadan.
Haddii ay suurogal tahay, ku dar magaca qofka lala xiriirayo haddii ay jirto xaalad degdeg ah ama dillaac.
Markaana ku dhammeystir saxiixaaga elektiroonigga ah ama magacaaga iyo magacaaga dambe.
Qaaciddada xushmada leh daruuri uma ahan lagama maarmaanka u ah farriinta noocan ah. Adiga ayey kugu jirtaa, iyadoo kuxiran macnaha guud, haddii aad rabto inaad kudarto.
Farriinta maqnaanshaha otomaatiga ah: nambarka nambarka 1
Waan helay fariintaada! Hadda waxaan ku maqnaa fasax waxaan ku soo noqon doonaa DD / MM / YYYY.
Waan ku faraxsanaan doonaa inaan kaaga jawaabo markaan soo noqdo.
Haddii faragelinteedu ay lagama maarmaan tahay, saaxiibkay (magaca koowaad MAGACA DAMBE + ciwaanka email) waa gacantaada.
Saxeexaaga elektiroonigga ah.
Farriinta maqnaanshaha otomaatiga ah: nambarka nambarka 2
Waxaan u maqanahay fasaxkeyga DD / MM / YYYY ilaa DD / MM / YYYY.
Waan fiirsan doonaa fariintaada waxaanan u degdegayaa inaan uga jawaabo sida ugu dhakhsaha badan mar alla markii aan soo noqdo.
Si kastaba ha noqotee asxaabteyda Mr.
Farriinta maqnaanshaha otomaatiga ah: nambarka nambarka 3
Waad ku mahadsantahay fariintaada.
Waxaan ka maqanahay DD / MM / YYYY ilaa DD / MM / YYYY adna waad si dhaqso leh uga jawaabi doontaa markaan soo laabto.
Haddii loo baahdo, Mr. (magaca hore ee magaca NAME) si firfircoon ayuu kuu daryeeli doonaa.
Farriinta maqnaanshaha otomaatiga ah: nambarka nambarka 4
Waad ku mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtay! Waxaan ka maqanahay DD / MM / YYYY ilaa DD / MM / YYYY ayaa lagu daray.
Sababaha qarsoodiga ah, ma lihi marin-iimaylkayga muddadan.
Dabcan waxaad fursad u leedahay haddii ay xaaladdu u baahan tahay inaad la xiriirto Mr.
Farriinta maqnaanshaha otomaatiga ah: nambarka nambarka 5
Fariintaada waa la keydiyay
Ka maqnaanshaha xafiiska DD / MM / YYYY ilaa DD / MM / YYYY Waan socodsiin doonaa emaylkaaga markaan soo laabto.
Haddii ay jirto baahi degdeg ah, fadlan la xiriir Mr. (Magaca hore LAMBAR MAGACA + cinwaanka emaylka).
U diyaari farriinta maqnaanshaha tooska ah ee Fasaxyada May 13th, 2020Tranquillus
horeU maaree boostadaada si wax ku ool ah
socdaAyaa ka faa'iidaysan kara joojinta shaqada ee la xiriirta xiritaanka iskuulada? Haddii aad xaq u leedahay, waa immisa iyo muddada magdhowgu?